China Mkpa okpomọkụ na iru mmiri na ọkụkọ ugbo Manufacturer and Supplier | HENGKO
Igwe anaghị agba nchara Myọcha
Igwe anaghị agba nchara Myọcha Disc
Igwe anaghị agba nchara Myọcha tube
Igwe anaghị agba nchara Myọcha efere
Igwe eji igwe anaghị agba nchara
Sinter igwe anaghị agba nchara Myọcha
Sinter Powder Metal Myọcha
Ntụ ntụ Sintered porous Metal Myọcha Ihe
Sintered oze Myọcha
Igwe anaghị agba nchara ntupu Myọcha
Air mofla Silencer
Tempuridity Data Data Logger
Igirigi Onye na enye aka
Okpomọkụ iru mmiri mmetụta
Tem & iru mmiri Transmitter
Iru mmiri mmetụta Housing
Nkume Carbonation Diffuser
Nkume Carbon Beer Oxygen
Afụ diffuser Air Stone
Gas Detector mmetụta Housing
Slọ Mgbakọ Gas
Porous Metal Myọcha
Iru mmiri mmetụta IOT ngwọta
Mkpa okpomọkụ na iru mmiri na ọkụkọ ugbo
Oge oyi na-abịa, ebe ugwu na ndịda abanyela n'oge oyi, ọ bụghị naanị ndị mmadụ oyi, ọkụkọ ga-abụ "oyi". Okpomọkụ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nwere ike ime ka ọnụego lanarị na ịmịpụta ọkụkọ ọkụkọ na ugbo ọkụkọ, anyị niile maara na ọ bụ naanị na gburugburu ebe obibi kwesịrị ekwesị ka àkwá ndị ahụ toro ma mechaa ghọọ ọkụkọ. Na usoro ịzụlite ụmụ ọkụkọ, ọnọdụ okpomọkụ pere mpe, ụmụ ọkụkọ na-adị mfe ijide oyi ma na-ebute afọ ọsịsa ma ọ bụ ọrịa iku ume, ụmụ ọkụkọ ahụ ga-ezukọta iji kpoo ọkụ, na-emetụta nri na ọrụ. Ya mere, anụ ọkụkọ aghaghị ị paya ntị na nchịkwa nke okpomọkụ.
Okpomọkụ nlekota na akara na ọkụkọ coop ：
Ọnọdụ okpomọkụ dị na nke mbụ ruo ụbọchị nke abụọ bụ 35 ℃ ruo 34 ℃ na incubator na 25 ℃ ruo 24 ℃ na ọkụkọ ugbo.
Ọnọdụ okpomọkụ nke incubators site na 3 ruo ụbọchị 7 bụ 34 ℃ ruo 31 ℃, na nke ọkụkọ ọkụkọ bụ 24 ℃ ruo 22 ℃.
N’izu nke abụọ, ọkụ ọkụ incubator bụ 31 ℃ ~ 29 ℃, ebe ọkụkọ ọkụkọ bụ 22 ℃ ~ 21 ℃.
N’izu nke atọ, ọkụ ahụ incubator bụ 29 ℃ ~ 27 ℃, ebe ọkụkọ ọkụkọ dị 21 ℃ ~ 19 ℃.
N’izu nke anọ, ọnọdụ okpomọkụ nke incubator ahụ bụ 27 ℃ ~ 25 ℃, na nke ọkụkọ ọkụkọ bụ 19 ℃ ~ 18 ℃.
Ọkpụkpụ ọkụkọ na-eto eto kwesịrị ịkwụsi ike, enweghị ike ịgbanwu n'etiti nnukwu na obere, ga-emetụta uto nke ọkụkọ.
Iru mmiri dị na ọkụkọ ọkụkọ na-esite na mmiri mmiri nke sitere na iku ume nke ụmụ ọkụkọ, mmetụta nke ikuku mmiri na chicks na-agwakọta ya na ọnọdụ okpomọkụ. Mgbe nri okpomọkụ, akwa iru mmiri nwere obere utịp ke kwes ụkpụrụ nke ọkụkọ ahu. Otú ọ dị mgbe okpomọkụ dịtụ elu, ahụ ọkụkọ na-adaberekarị na nkwụsị ọkụ ọkụ, na oke iru mmiri nke ikuku na-egbochi ikpo ọkụ ọkụ ọkụkọ nke ọkụkọ, na ahụ ọkụ dị mfe ịgbakọta na ahụ, ọbụnakwa na-eme aru ogo ịrị elu, na-emetụta uto na akwa mmepụta effeciency nke ọkụkọ. A na-ekwenyekarị na 40% -72% bụ iru mmiri kwesịrị ekwesị maka ọkụkọ. Nke elu ịgba okpomọkụ nke ayak hens ebelata na-abawanye nke iru mmiri. Ntụaka data ndị dị ka ndị a: okpomọkụ 28 ℃, RH 75% okpomọkụ 31 ℃, RH 50% okpomọkụ 33 ℃, RH 30%.
Anyị nwere ike iji ihe nrịba ọkụ na iru mmiri iji chọpụta ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri na ọkụkọ, mgbe ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri dị oke elu ma ọ bụ dị obere, ọ ga-adịrị anyị mma iwere usoro oge, dị ka ịmepe ọkụ ọkụ maka ikuku na jụrụ ma ọ bụ na-eme ihe n'oge na-ekpo ọkụ. Hengko HENGKO® okpomọkụ na iru mmiri transmitter usoro ngwaahịa na-akpan mere maka okpomọkụ ma na iru mmiri nlekota na ike gburugburu. Ahụkarị ngwa gụnyere anụ ụlọ dị jụụ, kpo oku, ikuku ikuku ikuku (HVAC), anụ ụlọ anụ ụlọ, griin haus, ọdọ mmiri ọdọ mmiri, yana ngwa mpụga. Slọ nyocha ihe nyocha, ikuku ikuku nke ọma, ọsọ ọsọ nke gas na iru mmiri, ọsọ ọsọ ọsọ. Housinglọ ahụ na-egbochi mmiri ịbanye n'ime ahụ nke ihe mmetụta ahụ ma na-emebi ihe mmetụta ahụ, mana na-enye ohere ikuku ka ọ gafere maka ebumnuche nke iru mmiri iru mmiri (iru mmiri). Pore ​​size nso: 0.2um-120um, iyo dustproof, ezi interception mmetụta, elu filtration arụmọrụ. Pore ​​size, eruba ọnụego nwere ike ahaziri dị ka mkpa; anụ Ọdịdị, kọmpat urughuru bonding, ọ dịghị Mbugharị, fọrọ nke nta na-apụghị ịtọpụ n'okpuru obi ọjọọ gburugburu ebe obibi.
51-3, Fu 'otu West Road, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa anyị, biko hapụ email gị ka anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.
© nwebisiinka - 2001-3030: HENGKO.com Ikike niile echekwabara. Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
porous metal , Igwe anaghị agba nchara Myọcha, iru mmiri , Sintered Iyo , Nchọpụta Gas , Sparger